वैकल्पिक borscht रूपमा स्वादिष्ट कान फिनिस क्रीम
धेरै छ र नै पकवान, यो चाँडै नीरस हुन्छ भने, तपाईं नयाँ कुरा गर्न चाहन्छु। यो तातो व्यञ्जन विशेष गरी साँचो हो। हामी परम्परागत सूप वा चिकन सूप, कि मात्र एक अस्पष्ट recollection खान accustomed हो, सायद, तरल तातो खाना अन्य प्रकारका पनि छन्। यसलाई छन् बाहिर जान्छ। उदाहरणका लागि, कान, तर साधारण छैन, र कान फिनिस, तर साथ। हो, यो फिनल्याण्ड मा क्रीम र दूध सामान्यतः सूप सहित माछा व्यञ्जन, थपिएको छ किनकी, क्रीम छ। र फिनल्याण्डका बासिन्दाहरू आफ्नो तयारी गरौं माछा सूप हामी चाहनुहुन्छ जब, यो तयार गर्न सक्षम छन्, मात्र बिदा र सप्ताहन्तमा मा।
उदाहरणका लागि, तर यस्तो कान (को नुस्खा कुनै पनि विदेशी र हाम्रो लागि अबोध्य घटक आवश्यक छैन।, एक पाउन्ड बारेमा वजन ताजा ट्राउट तयार सफा प्राप्त गर्नुहोस्, यो धुन र innards छाला हटाउन। कुनै आवश्यकता हटाउन। सानो टुक्रा मा माछा कट। अब हामीले गर्नुपर्ने बोक्रा र घन मा आलु, प्याज र 3-4 को आधा किलो कटौती -। अर्को, यो माथि गहिरो पैन आलु को तल मा स्ट्रिप्स गुना - कटा प्याज, र प्याज छाला को शीर्ष मा ट्राउट को राख्नु-अप टुक्रा सबै यो उम्लिरहेको पानी भर्नुहोस्। 3-4 सेमी द्वारा कवर माछा मा। अब तपाईं नुन र मरिच थप्न स्वाद तर 2-3 मटर कालो allspice थप्न आवश्यक छ। यो एक पैन 2-3, उम्लिरहेको पछि मध्यम गर्मी मा राखे। यो सूप अर्को 15 मिनेट को लागि, जगाएर बिना, महाराज। गर्न शाब्दिक समय छ पकाएको सम्म मिनेट फेरि 200 एमएल क्रीम सूप मा खन्याउन र गरौं जोश। उम्लिरहेको पछि गर्मी देखि पैन हटाउन र कान फिनिस क्रीम तयार छ सूप दस मिनेट Infuse गरौं। गर्न, तुरुन्तै सेवा आवश्यक छ, सूक्ष्मता कटा साग संग प्रत्येक सेवा छर्कियो।
तपाईं अर्को, फिनिस माछा सूप लागि कुनै कम स्वादिष्ट नुस्खा प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि, तपाईं माछा (सामन वा सामन), एक प्याज र गाजर, तीन मध्य-आकार आलु को 350 ग्राम, क्रिम चिज को 100 ग्राम, दूध र क्रीम, टेबल2को 200 एमएल आवश्यक हुनेछ। चमचा वनस्पति तेल। मरिच, नुन र जडीबुटी स्वाद थप्न। पनि अग्रिम पानी उम्लिरहेको को 1 लीटर तयार। एक भद्दा grater गाजर मा RUB, सूक्ष्मता प्याज काट्नु र (माछा सूप पकाउन हुनेछ जो यो पैन मा सिधै गर्न सकिन्छ,) तेल तिनीहरूलाई तलना। अब, पैन मा उम्लिरहेको पानी खन्याउन र diced आलु खन्याउन। दस मिनेट को लागि सबै जोश गरौं, त्यसपछि एक पैन माछा स्लाइस र कसा भयो राख्नु पनीर। नुन र मरिच। कान अर्को 10 मिनेट लागि पकाएको छ गरौं। पकाएको सम्म मिनेट को एक जोडी को लागि दूध र क्रीम थप्नुहोस्। को सूप फेरि एक फोडा गर्न आउँदा, गर्मी हटाउन। बस तालिका मा एक सानो जिद्दी र त्यसपछि कान जडीबुटी यसलाई छिडकना गरौं सेवा अघि। क्रीम र दूध संग फिनिस यस्तो कान संग पारंपरिक रोटी वा या त टोष्ट वा पटाखे खुवाउनुभयो।
तपाईं groats संग सूप को richness प्रेम भने, निम्न नुस्खा प्रयोग गर्नुहोस्। पानी दुई लिटर (4 सर्विंग्स) तपाईं आवश्यक:
- टाउको, पुच्छर र सामन ठूलो पर्याप्त को पंख;
- तीन मध्यम आलु;
- ठूलो प्याज;
- कोदो को आधा कप;
- तीन मध्यम टमाटर
र मसाले: मरिच र 5-6 मटर allspice, ल्वाड़ कुराहरू 2-3, 1-2 Laurel पत्ती परम्परागत नुन र कटा साग डिल (स्वाद)।
यो सामन को सूप निम्नानुसार कोदो संग तयार पारे। एक पुच्छर संग माछा टाउको र चिसो पानी पंख र simmer गर्न थाल्छन्। यस जब माछा शोरबा पकाएको छ, यो सुन्दर हुन र नाली गर्नुपर्छ। Straining cheesecloth को 2-3 पत्रहरु मा जोडेको फिट गर्न। तनावपूर्ण शोरबा फेरि उम्लिरहेको र यो आलु, diced भर्न ल्याए, र खुली र diced टमाटर, सूक्ष्मता प्याज र कोदो कटा (पूर्व-धोए)। हुनत यो एक ढिलो आगो सबै पकाएको छ, पहिलो माछा मा एक पकाएको सूप आनन्द - को हड्डी बाट मासु अलग। जब अघि पकाउने अन्त5मिनेट, मसला, नुन र मरिच संग कट्टर सूप हुनेछ। पाँच मिनेट पछि, बन्द स्टोभ, कभर पैन एक ढक्कन संग बारी र सूप दस वा पन्ध्र मिनेट Infuse गरौं। अर्को, प्लेट सालमन स्लाइस मा व्यवस्था, वर्तमान ताजा, सूक्ष्मता कटा साग संग सूप र garnish खन्याउन। यो साँच्चै हो शाही कान क्रीम संग फिनिस मा कान भन्दा कुनै खराब छ। कुनै पनि मामला मा, आफ्नो मेनु एक बिट थप वैविध्यपूर्ण थियो।
कसरी फर्सी porridge तयार?
चामल संग चिकन: जापानी र मा रूसी
Boletus edulis: लाभ, पोषण मूल्य, ताप सामग्री, प्रयोग
"छाला" कस्मेटिक्स। समीक्षा: "फाइदा" र "बुरा"
यदि तपाईंको खुट्टा बीच के rubbed?
साँचो आउन चाहनुहुन्छ? इच्छा को प्रविधी प्रदर्शन
संसारको सबैभन्दा हिंसात्मक खेल के हो
सुन्निएको आँखा, के गर्ने?